10 Awesome Ezumike mgbazinye Places Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Awesome Ezumike mgbazinye Places Na Europe
Nzuzo, 5-kpakpando ụlọ ọrụ, breathtaking echiche, na ebe, nke na-esote 10 ntụpọ enwetawo ya niile. ndị a 10 egwu ezumike mgbazinye ebe na Europe gbara ya gburugburu site na okike di egwu ma bia.
1. Awesome Ezumike mgbazinye Ebe Na France: Provence
Nkume ụlọ, Obodo ochie nke French, ọmarịcha ugwu Dentelles de Montmirail, Provence bụ otu n'ime 10 kasị egwu ezumike mgbazinye ebe na Europe.
Firstly, aza na lavender isi na buru cherị si osisi bụ otu n'ime ihe kasị mma na-eme na Provence. Nke abuo, na-enwe mmasị na Mont Ventoux mara mma site na windo nke ụlọ obodo gị ga-akarị nrọ ọ bụla ị nwetụrụla banyere ezumike zuru oke..
Na Provence, ị nwere ọtụtụ ezumike mgbazinye ulo nhọrọ: Mlọ ugbo, Obodo, na ụlọ ndị mara mma. A na-akwado ezumike ezumike niile iji kwado ezinụlọ na ụmụaka, ma ọ bụ ìgwè ndị enyi.
site $136 maka a 2 ime ulo ka $350 maka obodo, kwa abalị.
2. Best Ezumike mgbazinye Ebe Na Europe Na Italy: Tuscany
The Tuscan wine ndagwurugwu bụ ihe magburu onwe ezumike mgbazinye ebe ke Italy. Ugwu silky bụ ebe magburu onwe ya maka ezumike izu ike. Dị ka ọmụmaatụ, agwaetiti na-adọrọ adọrọ nke Giglio, ma ọ bụ ebe obibi ndị mọnk Franciscan dị na La Verna, bụ nnukwu ọrụ ịlaghachi azụ na mpaghara Tuscan mara mma.
Ọzọkwa, na-eteta n'ụtụtụ, na-apụ n'ubi ala ubi gaa na echiche mara mma nke Tuscany – enweghị ọnụ. Ebe a, ị nwere ike ịhọrọ ịhọrọ site na izu ike n'akụkụ ọdọ mmiri nke nwere iko mmanya, ma ọ bụ ịga njem njegharị mmanya.
Obodo, ụlọ, na ulo.
$68 ka $200 kwa abalị.
Ọrụ maka Kidsmụaka: Kpamkpam! Ebe ndị toro eto na-ekpudo onwe ha, ụmụaka nwere ntiwapụ na ubi zoological nke Pistoia ma ọ bụ Cavallino Matto ama mkpori ndụ in Livorno.
Florence gaa Grosseto Na ụgbọ oloko
Perugia gaa Grosseto Na ụgbọ oloko
Viterbo ji ụgbọ oloko gaa Grosseto
Rome na Grosseto Na Agbọ oloko
3. Ebe ezumike kacha mma na UK: West England
Unsọ osimiri mara mma, ụlọ nkume, mara mma anyanwụ dara, na ịdị jụụ, mee South West England ka ọ bụrụ ebe ezumike ezumike zuru oke n’ime ime obodo bekee. Na mgbakwunye, na maa mma obodo gbara osimiri okirikiri nke Devon na Dorset echekwawo amara ha ruo ọtụtụ afọ wee guzoro obi ike n'aka oge na ikuku dị nnu.
Ije ije n'akụkụ osimiri ọla edo, na-enwe mmasị n'oké nkume Simon Old Harry, ma ọ bụ Jurassic Coast, tie aka obodo oge obula. Mgbe m nọ ebe a, ị ga-eche na ị na-agaghachi azụ n'oge site n'oge gara aga ruo oge 17nke na narị afọ. Okirikiri ala na-agwa gị akụkọ banyere oge na usoro nke okike na akụkụ a nke England, ebe ụlọ akịrịka ma ọ bụ nke ọdịnala ọdịnala ga-agwa gị ndụ na ọdịbendị na West England.
Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-nkọ na English omenala, gardens, ije, na akụkọ – mgbe ahụ ị ga-ahụ na West England nwere ụfọdụ nke egwu ezumike mgbazinye ebe na Europe.
$70- 320 kwa abalị
4. Awesome Ezumike mgbazinye Ebe Na Switzerland: The Swiss Alps
na n'elu 10,000 nnabata nhọrọ, na Swiss Alps bụ ihe dị egwu ezumike mgbazinye ebe na Europe. The Switzerland Alps pụtara ugwu ugwu, awade echiche kacha mma, odida obodo, ụzọ ụkwụ, mma, vasatail ezumike mgbazinye Njirimara, nke ahụ ga-eme ka agba gị daa.
Otu n'ime ihe kachasị mma maka mgbazinye ezumike na Switzerland Alps bụ na enwere ụlọ maka uto na otu ọ bụla. Maka ezinụlọ, ìgwè ndị enyi, na-ekpo ọkụ n'èzí, chaletị, ugwu ma ọ bụ ndagwurugwu - Switzerland Alps dị iche iche nke na ha bụ ezigbo ebe ezumike maka onye ọ bụla.
Ya mere, ugbu a, ị ga-ahọrọ n'etiti ebe a na-egbu-egbu dị ka Lucerne, ma ọ bụ ndagwurugwu mmiri iyi, lake Maggiore ma ọ bụ echiche ugwu na njem gị gaa ezumike kachasị echefu echefu.
Chaatị, ụlọ osisi, ụlọ, ma ọ bụ ụlọ.
site $92 maka ulo iji $265 kwa abalị maka obere ụlọ ma ọ bụ ụlọ nwere echiche ọdọ.
5. Awesome Ezumike mgbazinye Places Na France
France bụ ihe ịtụnanya ezumike mgbazinye ebe na Europe. Na ọtụtụ mara mma na vasatail ebe, ọ na-esiri anyị ike ịhọrọ naanị otu ebe ezumike ezumike dị egwu maka ezumike French ọzọ.
Ọmụmaatụ, Biarritz nwere osimiri ndị mara mma, mgbe ndagwurugwu Dordogne na-enye ugwu dị ịtụnanya na echiche osimiri.
Ọ bụla ebe ezumike mgbazinye ị họọrọ, mgbazinye ezumike gị dị ịtụnanya ga-akwado ya nke ọma, na ubi mara mma, na na ọmarịcha ógbè nke France.
Na Brittany, ị ga-ahụ ụlọ ndị ezumike maka mgbazinye ezumike, ma ọ bụ ụlọ nwere ụzọ nzọ ụkwụ na ọdụ mmiri mara mma.
$75 – $145 kwa abalị
Nantes to Tours With A ụgbọ oloko
Lille na njem na a ụgbọ oloko
Lille na Paris Na A Train
6. Awesome Ezumike mgbazinye Ebe Na Czech Republic: Bohemia
Bohemian Switzerland bụ otu n'ime mpaghara dị ebube na Europe. N'ihi ịtụnanya sandstone ugwu na echiche nke Elbe osimiri, Czech Switzerland bụ ezumike ezumike. N'ihi ya, ọ bụ ihe dị egwu ezumike mgbazinye ebe na Europe.
Ebe a na-enye echiche di egwu, ọtụtụ ụzọ ụkwụ, ezinụlọ ntụpọ picnic, na osimiri igwu mmiri.
Homeslọ nke oge a dị nso na anụ ọhịa, na ndu nke 100 nde afọ. Obodo Decin bụ ebe magburu onwe ya ịgbazite ụlọ gị na ụlọ.
$90 – $150 kwa abalị
7. Awesome Ezumike mgbazinye Ebe Austria: Chika Okonkwo
Emi odude ke usụk usụk Austria, ala Styrian Alpine bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mma n’Ọstria. Ya mere, Styria bụ ebe ezumike ezumike dị egwu na Europe: echiche, ihe glacier, ahịhịa ndụ, na ebe mara mma.
Na mgbakwunye na echiche ndị dị ebube na ụzọ ụkwụ njem, na Styria, ị ga-zuru ike mgbe a nleta na eke mmiri iyi. Nhọrọ, ekele maka ọtụtụ osisi apụl na ubi vaịn, i nwere ike itinye isi gị, ma ọ bụ enwe a na-atọ ụtọ picnic.
ụlọ osisi, ụlọ ndị nwere ọdọ mmiri, chaletị.
$65 – $200 kwa abalị
8. Awesome Ezumike mgbazinye Ebe: London
London bụ otu n'ime ihe ndị kasị egwu ezumike mgbazinye ebe na Europe n'ihi na ọ bụ a obodo nke adịghị agwụ agwụ nhọrọ. N'ebe a, ị ga-ahụ agbata obi pụrụ iche na nke mara mma, na dị iche iche ije, omenala, na vibes. Notting Hill bụ nrọ, Hampstead Heath bụ ọdịnala ma na-ama ifuru, na Kensington bụ posh na trendy. Ndị a bụ nanị ihe atụ ole na ole nke ebe ndị dị egwu maka ịdenye mgbazinye ezumike ezumike gị na-esote ụlọ.
Ọzọkwa, London na-enye ọtụtụ nlegharị anya, ahịa, ngosi ihe mgbe ochie, na ogige ntụrụndụ maka ụdị uto na ụdị ezumike ọ bụla. Ya mere, London ga-abụ mmeri zuru oke maka a ezumike ezinụlọ na Europe na ụmụaka: ogige ntụrụndụ, ụlọ ahịa pastry kacha mma, na Harry Potter n’ezie.
Ulo ulo na etiti London, na ụlọ ndị dị na mpụga London, depending on the zone.
9. Awesome Ezumike mgbazinye Ebe Na Germany: Bavaria
Bavaria bụ otu n’ime mpaghara kachasị mma na Germany, akpan akpan ke ini utọ. Site na Alps rue osimiri Danube, music, na nri Bavaria, nwere ọtụtụ ihe ịme, a 10-njem ụbọchị na Bavaria nwere ike ọ gaghị ezuru ịnụ ụtọ ihe niile ebe a mara mma nwere.
N'ihi ya, ị kwesịrị ị na-eme atụmatụ nke ọma maka ezumike gị na Bavaria. Ebe ọ bụ na Bavaria bụ otu n'ime ebe ezumike kachasị amasị na Germany, maka ndị obodo na ndị njem nleta, ezumike mgbazinye agbasaghị na-gbaa akwụkwọ a ọnwa ole na ole tupu. Na mgbakwunye na ntinye akwụkwọ ụlọ, ime ihe kachasị mma nke ezumike Bavarian gị, nyocha ma mepụta ndepụta nke nlegharị anya na ihe omume ị ga-emerịrị, ma nwee njem izugbe.
Obodo, ụlọ, na ụlọ.
$80- $350 kwa abalị
10. Awesome Ezumike mgbazinye Ebe Na Italy: Lake Como
Lake Como bụ otu n'ime ebe ezumike kachasị ewu ewu na Itali. N'agbanyeghị eziokwu ahụ ọ nwere ike iju ndị mmadụ anya n'oge ọkọchị, ọdọ mmiri na-ekiri ugwu, na ọnọdụ dị jụụ, tinye Lake Como na 10 kasị egwu ezumike mgbazinye ebe na Europe.
Oge kacha mma iji ezumike na Lake Como bụ n’agbata Machị ruo Nọvemba, mgbe ọnwa Julaị-Ọgọst bụ ọnwa na-ekpo ọkụ na-enweghị nsogbu. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa na ị ga-eme nyocha gị tupu oge eruo. Ya mere, ihe kachasị mkpa bụ ịlele ebe obibi na uru na ọghọm maka ị nweta mgbazinye ezumike na ọdọ, maka akụkụ ọ bụla nke afọ.
Obodo Lulọ, ụlọ, chaletị, na ulo.
$40 kwa ụbọchị iji $500 kwa izu
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere atụmatụ maka njem na 10 kasị egwu ezumike mgbazinye ebe na Europe. A ụgbọ okporo ígwè na-aga na ebe na a dreamy home pụọ n'ụlọ bụ quickest na kasị oké ọnụ ụzọ nke njem.
You chọrọ Embed anyị blog post “1o Awesome Ezumike mgbazinye Places Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fvacation-rental-places-europe%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)